VR Theater for Cardboard APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Cardboard များအတွက် VR ပြဇာတ်ရုံ
Cardboard APK ကိုများအတွက် VR ပြဇာတ်ရုံ
ဒီ app ကိုနောက်ကွယ်မှအမြိုးမြိုး၏အဘယ်သူမျှမကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံရှိပါတယ်: ငါ့အားလပ်ချိန်တွင်ငါပြုပါအရာတစ်ခုခုပါပဲ။ သင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကို rating ပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်ခွာသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးစဉ်းစားပါ။
=== Sales စေး
သငျသညျသငျ့လျြောသော VR အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမီဒီယာပလေယာများအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း
သငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေစောင့်ရှောက်နေစဉ်တွင်, ဒီတစ်ခုပါ Give!
တူ, အကြီးအ features တွေအားကစား:
• bug တွေအများကြီး
•ကန့်သတ် features တွေ
•ရှက်စရာ User Interface
•ကန့်သတ်ထားသည်ရုပ်ရှင်ကို formats compatibility
Google+ တွင်အိပ်ရာဂိမ်းများဆော့ဗ် ': http://goo.gl/1WQNDl
Facebook ပေါ်မှာ VR ပြဇာတ်ရုံ: https://www.facebook.com/vr.theater
=== ရှည် Sales စေး
(စမြင်ကွင်းကျယ်2°နှင့်3°ရုပ်ရှင်တွေကို support) အခမဲ့, တစ်ဦးကို virtual ရုပ်ရှင်ရုံ၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင် 360D နှင့် 180D ရုပ်ရှင်ပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
အပြည့်အဝ Virtual Reality: တဝိုက်သည်သင်၏ခေါင်းကိုဖွင့်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပါ။
2 (ရိုးရိုးသားသားရှင်းလင်းသော) 3D ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့ဓာတ်ပုံပြပွဲသူတွေကိုများစွာ။
အားလုံး mp4 ဖိုင်တွေ (နှင့်ကံကိုအခြားပုံစံတစ်ခု bit နဲ့အတူ ... ) နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, ဝဘ်နှင့်အခြား application များအနေဖြင့်ရုပ်ရှင်ကစားနိုင်ပါတယ်။
SBS, အထက် / အောက်နှင့်အနီရောင်-စိမ်းပြာအန်နာဂလဖ်ကဲ့သို့အများအပြား 3D ရုပ်ရှင်ကို formats ထောက်ခံသော်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာပုံမှန် 2D ရုပ်ရှင်ပါဝင်သည်။
ကြော်ငြာမပါ, In-app ကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်စာရင်းဇယားစုရုံးခြင်းမရှိ: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန် 100% အခမဲ့!
သူသည်နောက်ဆုံးတွင် bit နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ထဲကင်, ဒါပေမဲ့သူထွက်အလုပ်လုပ်လာတယ်။
အိမ်မှာကိုယ့်ကိုယ် Make: က "Options ကို" menu ကိုစစ်ဆေးနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်ပြဇာတ်ရုံကို configure!
က virtual မျက်နှာပြင် ( "ဆင်အိပ်မက်" (ဂ) မူပိုင် 2006, Blender Foundation မှ / နယ်သာလန်မီဒီယာအနုပညာ Institute မှ / www.elephantsdream.org) အပေါ်ကိုယ်စားပြုရုပ်ရှင်, လွတ်လပ်စွာနှစ်ဦးစလုံးဟာ SBS အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ကျော် / ဗားရှင်းအောက်ရှိ URL မှာနိုင်ပါတယ်: https : //orange.blender.org/blog/elephants-dream-in-stereoscopic-3d
အချို့သောပျက်ကျကြုံတွေ့ခဲ့ကြလိမ့်မယ်တဲ့သူက Android 8 နှင့်အတူလူများအတွက်ဖွင့်သေးငယ်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်။
ပတ်ပတ်လည်ကပ်ဘို့အ Thank you!
28.00 ကို MB
Install လုပ်နည်း ...
HD ကိုဗီဒီယိုပလေယာ - ...